Habdhiska Muruqyada & Habdhiska neefsiga-Qeybta 3aad | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Qiso Xikmadaysan: Qofka Beera Miraha Fitnada iyo Iska Horkeenka Isaga Ayaa Gurnaya ITukesomalism.com
Jabniinka: Sidee Ayaan Ku Xalin Karnaa Jabka?
Miski Cabdinuur Salal, January 19, 2019
Habdhiska Muruqyada & Habdhiska neefsiga-Qeybta 3aad
Ilhaan Ciise Maxamed — January 25, 2020
Habdhiska muruqa wuxu ka koban yahay muruqyo aad uafara badan oo keena dhaq-dhaqaaqa jirka oo dhan, badanaaba muruqyadu waxa ay ku dhisanyihiin lafaha,waxaase jiro muruqyo aanan ku dhaganeyn lafo balse ku dhagan jirka, dhaqdhaqaajiyana xubnaha ey ku dhaganyihiin tusaalana waxaa u ah Muruqyada dhaqdhaqaajiya “suniyaha Isha”.
Shaqada Habdhiska Muruqyada ”The finction of muscular systemn”
Muruqyada howl aad uqaayo leh ayey jirka uhayaan waxaana kamid ah:
Waxayna keenaan kul (heat production) fara badan ee uu jirka u baahanyahay.
Smooth Muscle:waxaa laga helaa meelwalba uu muruq kujiro marka lagareebo muruqa wadnaha.badanaa waa muruq aan maamuli karno sida muruqa gacanta ama Lugtaba.
Cardiac Muscle:waa muruqa wadnaha, waana mid aadan adigu maamuli Karin. Tusaale ma’istaajin kartid mana socod siin kartid.
Habdhiska Neefta ”Respiration systemn”
Habdhiska waxa uu kakoobanyahay marinno(waddooyin) iyo 2 sambabood oo kala ah:
Godka afka = Larynx.
Tubada hawada marto(bocor) =Trachea.
Meesha ey tubada ka qeybsanto=Bronchi.
Sanka: moqorada sanka waxay ka bilaawdaan labada dul ee dibadda ah waxayna ku dhamaadaan meesha ey iska galaan dulka sanka iyo dalqada.
Sanka wuxuu miiraa(nadiifiyaa) hawada.
Sanka wuxuu qaabilsanyahay urinta(smell).
Sanka wuxuu ka qeyb qaataa soo saaarista qashinka sida:-CO2, diifka IWM.
Sanka wuxuu caawiyaa codka.
Dhuumaha Hawada: (Bronchia):
Hunguriga cad waa dhuun gaaban siina marta luqunta hoosteeda, marka ey dhuuntaas gaarto sambabada aktooda ayey ukalaqeybsantaa 2 qeybood oo loo yaqaan (Bronchiols) waxeyna ku xiriirsamaan 2 sambabood oo waaweyn.
Waa labo xubnood oo waaweyn lana arki karo marka qofka qalliin lagu sameeyo saableyda Jirka Aadanaha(Operation).
waxa eyna Kuyaalaan Saableyda labadeeda baal, sambabada waxey u qaab ekyihiin tobin waxayna buuxiyaan moqorka ama duleelka saableyda waxayna kakoobanyihiin:-
N.B:cuduro badan ayaa jira oo sambabada dhaawaca oo ey kamid yihiin cudurada faafa, brunkiitada, T.Bda iyo kuwo badan.
Mahadsanidiin————-lasoco qeybta 4aad
Tags: Habdhiska Muruqyada & Habdhiska neefsiga-Qeybta 3aad.
Next post Kurdiyiintu Maxay Yihiin? Halkey ka yimaadeen? Maxaysan dal u lahayn?
Previous post Akhlaaqiyaadka Suubban